Toerana filalaovana anaty trano amidy, Fitaovana filalaovana - Funlandia
Milalao ny ankizy
Momba an'i FUNLANDIA
Funlandia Play Systems Inc. dia mpanamboatra kianja filalaovana anaty trano, na eto an-toerana izany na any ivelany. Izahay dia manome ny mpanjifanay vahaolana feno ho an'ny indostrian'ny filalaovana anaty trano manomboka amin'ny drafitra, ny famolavolana, ny fikarohana ary ny fampandrosoana, ny famokarana, ny fananganana, ny asa ary ny serivisy aorian'ny fivarotana.
Funlandia dia manamboatra kianja filalaovana anaty trano araka ny fenitra fiarovana sy kalitao amerikana avaratra sy eropeana. Avy amin'ny akora hatramin'ny kianja filalaovana iray manontolo, Funlandia dia nandalo fitsapana fanamarinana azo antoka indrindra eto an-tany, toy ny ASTM, EN ary CSA, ary nampihatra ireo fenitra ireo amin'ny antsipiriany rehetra hatramin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana hatramin'ny famolavolana, famokarana ary fametrahana.
Drafitra sy famolavolana
Ekipa mpamorona lalaovin'ny lalao «fusion» mitarika indostrialy izahay.
Mirehareha izahay Ankizy Play & Adventure, fitaovana milalao 300+ vaovao.
Fitsipika momba ny kalitao
Mihaona amin'ny fenitra fiarovana sy kalitao amerikana avaratra sy eropeana izahay.
Voamarina ny fiarovana
Nandalo fitsapana fanamarinana henjana toy ny ASTM sy EN izahay.
Serivisy sy mpiara-miasa
Manana ekipa serivisy misy olona 200+ izahay ary mpiara-miasa amin'ny kaontinanta 6.
Miakatra amin'ny rindrina
Sehatra azo ampiharina
Hotel & trano fandraisam-bahiny
Vahaolana filalaovana bokotra
Mamokatra & mametaka
Ny tetikasanay eran'izao tontolo izao
Any Sina Amin'ny Global
Tetikasa ： BEIYOU Iraisam-pirenena
Tetikasa ： BEIYOU Iraisam-pirenena Toerana ： Sina
Tetikasa ： L SPORTS PARK
Tetikasa ： L SPORTS PARK Toerana ： Sina
Tetikasa ： 798 FLY SPORT
Tetikasa ： 798 FLY SPORT Toerana ： Sina
Tetikasa ： PLANET ACTION
Tetikasa ： PLANET ACTION Toerana ： Sina
Tetikasa: Magic Loft
Tetikasa: Magic Loft Toerana: Nouvelle Zélande
Tetikasa: Supaworld Toerana: Aostralia
Tetikasa: Kid Cosmic
Tetikasa: Kid Cosmic Toerana: France
Tetikasa: Big Little Park
Tetikasa: Big Little Park Toerana: France
Rehefa mieritreritra ny hanokatra ivon-toerana fialamboly ianao dia omeo fotoana izahay!
Midira amin'ny vondrom-piarahamoninay
Copyright 2010-2021 funlandia.com Zo rehetra voatokana. Vokatra mafanaSitemapFitaovana filalaovana lalao an-trano, Big Air Trampoline Park Franchise, Mpanamboatra kilalao zaza kilalao, Trampoline Park Manamboatra, Sarany amin'ny zaridaina filalaovana anaty trano, Milalaova fitaovana ho an'ny zazakely,